यीनै हुन् गुल्मीकी सम्झना खत्रीका ह`त्यारा,अन्तत छिमकी नै ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यीनै हुन् गुल्मीकी सम्झना खत्रीका ह`त्यारा,अन्तत छिमकी नै !
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले भाडगाउँकी सम्झना खत्रीको ह-त्या-मा सं-ल-ग्न एकजनालाई आज सा-र्व-जनिक गरेको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी ह-त्या-रा सार्वजनिक गरेको हो ।
सोही नगरपालिकाको वडा नं ३ कै अ-भियु-क्त लाल बहाुदर खत्रीलाई प्रहरीले सा-र्व-जनिक गरेको हो । लामो समयदेखि अ-नुस-न्धान गरिरहेको प्रहरीले उनलाई फाल्गुण १ गते नि-य-न्त्रणमा लिएको थियो । खत्री वि-रु-द्ध सम्झनाका ससुरा गणेश बहादुर खत्रीले जा-हेरी दिएपछि उनलाई प-क्रा-उ गरिएको थियो । उनले सम्झनाको ह-त्या आफैले गरेको स्वी-का-रेका छन् ।
फाल्गुण १९ गते गुल्मी जिल्ला अ-दा-लतबाट नी-ज लालबहादुर खत्रीको नाममा ७ दिनको म्या-द थप गरी घ-ट-नाको बारेमा अ-नु-स-न्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । के कारणले ह-त्या गरेको भन्ने बारेमा भने खुल्न सकेको छैन् । लाल बहादुर सम्झनाका छि-मेकी हुन् । उनको घर नजिकै रहेको छ ।
घ-टनाअनुसार रेसुंगा ३ गुल्मीकी सम्झना बोहरा खत्री गत माघ २९ गते बे-प-त्ता भइन् । ३० गते उनी ह-राएपछि माइती र परिवार पक्षले प्रहरीमा उ-जुरी दिए ।उ-जुरीपछि गाडी चलाउँदै आएका श्रीमान् नेत्र बहादुर खत्रीको सो-धी-खो-जी प्रहरीले ग-र्यो । उनले आफु काठमाडौं, बुटवल रहेको बताएपनि उनलाई प्रहरीले गुल्मीबाटै प-क्रा-उ गर्यो । सोधपुछका लागि सासु टोमकला खत्रीलाई प्रहरीले प-क्रे-र के-र-का-र गर्यो ।
सासु खत्रीले २९ गते राती ३ जना व्यक्ति आएर सम्झनालाई लि-एर ग-एको ब-यान दिइन् । प्रहरीका अनुसार उनले आफु र १४ महिनाका नातिलाई थु-नेर ती ३ जनाले सम्झनालाई लिएर ग-एका थिए । फागुन १ मा प्रहरीले सो-ध-पुछ गरेर टोमकलालाई घर पठायो । घर गएकै राती उनले आ-त्म-ह-त्या गरिन् । उनले आ-त्मह-त्या गरेपछि सम्झनाका माइती पक्ष र घर पक्षबीच आ-क्रो-श ब-ढ्यो र प्रहरी कार्यालय घे-रा-उ गरे ।
सम्झनाका घरपक्षले सासुलाई त-ना-ब दिएर आ-त्म-ह-त्या गर्न दु-रु-त्सा-हन गरेको भनेर प्रहरीमा उ-जुरी दिए । त्यसपछि प्रहरीले आ-त्म-ह-त्या दु-रु-त्सा-हन मु-द्दामा सम्झनाका बाबुआमा र जेठीआमालाई नि-य-न्त्र-णमा लियो । दुवैपक्षको ती-ब्र द-बाब र आन्दोलनपछि प्रहरीले घ-ट-नाको नि-चो-ड निकाल्न सकेन । बे-प-त्ता भएका १९ दिनसम्म भएका आ-न्दो-ल-न र ध-र्नासम्म पनि सम्झनाको अ-त्तो-पत्तो थिएन ।
१९ दिनमा उनी मृ-त फेला परेको ख-बर प्रहरीले पा-यो र घ-ट-नाले अर्को मो-ड लिए। घरबाट करीब डेढ सय मिटर तल बारीको कु-ना-मा बो-रा-मा राखेर हा-त-खु-ट्टा बाँ-धे-को अ-वस्थामा वि-क्षि-प्त अवस्थामा सम्झनाको श-व फेला परेको थियो ।